နံဂံခွားမှာ ဈေးဝယျတာတောငျ လကျ ၃ ခြောငျးထောငျပွ မှ ဝယျရတယျ ဆိုတဲ့ နခွေညျဦး – Shwe Likes
နခွေညျဦး ဆို သူကတော့ အောငျရဲလငျး ရဲ့ ခဈြသူအဖွ ဈအနနေဲ့ လူသိမြား လာပွီးနောကျပိုငျး မှာတော့ မကျြနှာမှာ ရှိနတေဲ့ အမာရှတျအတှကျ အလှတှပွေငျပွရငျး သူမကိုယျ သူမ Beauty Blogger တဈယောကျ အဖွဈ သတျမှတျလာခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျတှေ ရငျထဲမှာတော့ Beauty Blogger က ဝငျးမငျးသနျး တဈယောကျ
ပဲ ရှိတယျ ဆိုတာတော့ သူမ မသိရော့လသေလားနျော… သူမရဲ့ အဖကေ စဈတပျထဲက တဈယောကျဖွဈပွီး အဖဖွေဈသူ ရှာထားတဲ့ ပိုကျဆံတှနေဲ့ သုံးဖွုနျးပွနသေူပဲ ဖွဈပါတယျ။ နခွေညျ ကတော့ အကောငျးစား ပစ်စညျးတှကေို သုံးထားနိုငျ သူဖွဈတာကွောငျ့ ဆယျကြျောသကျ အရှယျလေးတှေ ရှမှေ့ာတော့ အားကြ
စရာ မငျးသမီးလေးတဈပါး လိုဖွဈနတေော့တာပေါ့… နခွေညျကတော့ အဖေ့ အရှိနျအဝါနဲ့ ဖွဈလာတဲ့ အစှမျးအစတှနေဲ့ ပရိသတျတှရှေမှေ့ာ ကွှားဝါပွနခေဲ့ တာကိုလညျး ပရိသတျက အခဈြမပကျြ ခဲ့သေးပါဘူးနျော..ခုလိုဖွဈနတေဲ့ နိုငျငံရေး အခွအေနကွေီးမှာ သူမကတော့ အရိပျအယောငျလေးအနနေဲ့ ဟနျပွထှကျလာပွီး
တော့ ခုခြိနျမှာတော့ သူမတို့ရဲ့ နထေိုငျတဲ့ စရိုကျအတိုငျး နနေမွေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနလေ့ေးမှာလညျး နခွေညျဦး တဈယောကျ နိုငျငံခွားမှာ ဈေးဝယျထှကျနတေဲ့ ပုံကို တငျထားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံခွားမှာ ဈေးဝယျထှကျနတောတောငျမှာ
လကျ ၃ ခြောငျးထောငျပွီးမှ ဝယျရဲတဲ့ ဘ၀ ထငျပါတယျနျော. နခွေညျဦးခဈြကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး မတ်ေတာလေး ပို့ပေးလိုကျကွပါအုံးနျော…
နေခြည်ဦး ဆို သူကတော့ အောင်ရဲလင်း ရဲ့ ချစ်သူအဖြ စ်အနေနဲ့ လူသိများ လာပြီးနောက်ပိုင်း မှာတော့ မျက်နှာမှာ ရှိနေတဲ့ အမာရွတ်အတွက် အလှတွေပြင်ပြရင်း သူမကိုယ် သူမ Beauty Blogger တစ်ယောက် အဖြစ် သတ်မှတ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ ရင်ထဲမှာတော့ Beauty Blogger က ဝင်းမင်းသန်း တစ်ယောက်
ပဲ ရှိတယ် ဆိုတာတော့ သူမ မသိရော့လေသလားနော်… သူမရဲ့ အဖေက စစ်တပ်ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အဖေဖြစ်သူ ရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ သုံးဖြုန်းပြနေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည် ကတော့ အကောင်းစား ပစ္စည်းတွေကို သုံးထားနိုင် သူဖြစ်တာကြောင့် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်လေးတွေ ရှေ့မှာတော့ အားကျ
စရာ မင်းသမီးလေးတစ်ပါး လိုဖြစ်နေတော့တာပေါ့… နေခြည်ကတော့ အဖေ့ အရှိန်အဝါနဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ အစွမ်းအစတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရှေ့မှာ ကြွားဝါပြနေခဲ့ တာကိုလည်း ပရိသတ်က အချစ်မပျက် ခဲ့သေးပါဘူးနော်..ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေကြီးမှာ သူမကတော့ အရိပ်အယောင်လေးအနေနဲ့ ဟန်ပြထွက်လာပြီး
တော့ ခုချိန်မှာတော့ သူမတို့ရဲ့ နေထိုင်တဲ့ စရိုက်အတိုင်း နေနေမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာလည်း နေခြည်ဦး တစ်ယောက် နိုင်ငံခြားမှာ ဈေးဝယ်ထွက်နေတဲ့ ပုံကို တင်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ဈေးဝယ်ထွက်နေတာတောင်မှာ
လက် ၃ ချောင်းထောင်ပြီးမှ ဝယ်ရဲတဲ့ ဘ၀ ထင်ပါတယ်နော်. နေခြည်ဦးချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း မေတ္တာလေး ပို့ပေးလိုက်ကြပါအုံးနော်…